‘म भएको भए घरमै पुगेर,ढोका खोलेर, बेडरुपममा पसेर गाला मुसार्ने थिएँ: माधव नेपाल – Halkhabar kura
७ चैत्र २०७७, शनिबार १५:१८
‘म भएको भए घरमै पुगेर,ढोका खोलेर, बेडरुपममा पसेर गाला मुसार्ने थिएँ: माधव नेपाल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफू पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग छुट्टिइहाल्ने पक्षमा नभएको बताएका छन् । आफूहरुको ‘मायाप्रीति’ ४८ वर्ष पुरानो भएको भन्दै सजिलै नतोडिने उनको भनाइ थियो । आज आयोजित आफ्ना गुटनिकट युवाहरुको भेलामा ओलीले लामो समय ओलीको आलोचनामा खर्चिएका थिए । त्यसका बाबजुद ओलीसँग नछुट्टिने बताए ।
नेपालले भने, ‘हामी केपी ओली विरुद्ध संघर्ष गछौं, तर उहाँसँग छुट्टिइहाल्ने पक्षमा छैनौं । केपी ओलीसँगको मेरो मायाप्रिती कहाँ एक रातमा टुट्छ ? हाम्रो मायाप्रीति ४८ वर्ष पुरानो हो । हामी एकताको हात बढाउन चाहन्छौं ।’
ओलीले वैठकका लागि फोन गरेको सन्दर्भ उनले पुन कोट्याए । आफू भएको भए फोन गर्नेभन्दा निवासमै पुगेर फकाउने उनको भनाइ थियो ।
‘म अध्यक्ष भएको भए घरमै पुगेर,ढोका खोलेर, बेडरुपममा पसेर किन रिसाउनुभो भनेर गाला मुसार्ने थिएँ । फकाउन म जान्दछु नि । उहाँको काम होइन ? गार्जियनको काम नै हो फकाउने तर उहाँले त्यो गर्नुभएन’ नेपालले भने ।
पार्टी एकताको वकालत गरेका नपालले सर्वोच्चले एमाले ब्यूँताउने गरी गरेको फैसलाको भने आलोचना गरे । सर्वोच्चले विचित्र फैसला गरेको भन्दै उनले यसलाई मान्नु आफूहरुको वाध्यता भएको उल्लेख गरे ।
नेपालले भने, ‘जन्मेको बच्चा मान्दैनौं, फेरि गर्भमा लिएर जाउ भन्नेजस्तै फैसला आयो । बच्चा जन्मिसकेको छ । नयाँ संगठन अस्तित्वमा आइसकेको छ । तर सर्वोच्चले मानेन । फैसला गलत भए पनि हामीले वाध्य भएर लागू गर्नुपर्ने भइरहेको छ ।
उनले थपे, ‘दुईवटा पार्टी मिलिसकेका छौं । निर्वाचन आयोगले वैधानिक मान्यता दिइसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । चुनाव लडिएको छ । तर, सर्वोच्चले भन्छ पार्टीको एकता रद्द भयो । बडो विचित्रको फैसला । नाम जुध्यो भन्न सकिन्थ्यो । नाम फेरेर आउनुस भन्न सकिन्थ्यो । तर एकता नै भंग गरिदियो । हामी त्यसबारेमा बहस, छलफल गर्दै गरौंला । तर, अहिले निर्णय मान्न हामी बाध्य छौं ।’ पूर्वएमाले ब्यूँतिनुको अर्थ आफूहरु केपी ओलीमा जानु नभएको उनले अथ्र्याए।
‘यो फैसलाको अर्थ भनेको हामी ओलीमा जाने होइन, एमालमा फर्कने हो । ओली पनि एमालेमा फर्कने हो । एमालेको पुरानो संगठन ब्यँुताउने हो । तर, ओलीले यसलाई मान्न तयार छैनन् । अहिले सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय त्यही हो ।’
ओलीले पार्टीको वैठक बोलाउन पहिल्यैदेखि आनाकानी गर्दै आएको गुनासो नेपालले गरे । वैठकका लागि आफूहरुले अनुनय–विनय गर्दा पनि वैठक नडाकेको उनको भनाइ थियो ।
Previous आफूविरुद्ध मुद्दा चलाए अख्तियार प्रमुखको ‘सात पुस्तालाई दुःख दिने’ माधव नेपालको चेतावनी
Next प्रचण्डको त्यो बोलीमा सूर्य थापाको टिप्पणी: शायद डिप्रेसनमा फस्दै जाँदा यस्तै यस्तै बोल्छन् !